क्रिकेटरहरुलाई विमानस्थलमै पैसा बाँड्ने महिला को हुन् ? – PathivaraOnline
Home > समाचार > क्रिकेटरहरुलाई विमानस्थलमै पैसा बाँड्ने महिला को हुन् ?
क्रिकेटरहरुलाई विमानस्थलमै पैसा बाँड्ने महिला को हुन् ?
admin February 4, 2019 समाचार 0
माघ २१, काठमाडौं । सोमबार त्रिभुवन विमानस्थलमा क्रिकेट खेलाडीहरुलाई स्वागत गर्ने उभिनेहरुको लामै लाइन थियो । ठूलो सख्यामा रहेका क्रिकेट समर्थकहरुको लगातारको हुटिङका कारण वातावरण अस्तव्यस्त थियो ।
त्यही बीच एउटा नाटकीय देखियो । एक महिला क्रिकेट खेलाडीहरुलाई समाउँदै हातमा खाम थमाउन प्रयासरत थिइन् । उनको हातमा खामको ठूलै बिटो थियो ।
सुरुमा उनले ललित राजवंशीलाई खाम थमाइन् । ललित जिल्ल पर्न नभ्याउँदै उनले अरु दुई–तीन खेलाडीको हातमा खाम राखिदिइन् । त्यसपछि ‘क्याप्टेन… क्याप्टेन’ भन्दै कप्तान पारस खड्काको खोजी भयो । तर, पारस सञ्चारकर्मीहरुले घेरिएका थिए । त्यो देखेपछि नेपाली टिमका म्यानेजर रमण शिवाकोटीले ‘एकमुष्ट दिनुस्’ भन्दै खामको बिटो जिम्मा लिए ।
यसरी भटाभट खेलाडीहरुलाई खाम थमाउँदा कौतुहल बढ्यो कि ती महिला को हुन् र खाममा के छ ?
बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, उनी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाकी पत्नी रहिछन् । तिमल्सिनाले नै त्यहाँ खेलाडीहरुलाई पुरस्कार बाँड्न लगाएका थिए ।
तिमल्सिनाका सचिवालयमा कार्यरत अशोक पौडेलका अनुसार नेपाली टोलीमा रहेका २१ जनालाई जनही १० हजारको दरले नगद पुरस्कार बाँडिएको हो । ‘अध्यक्षज्यूले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट जम्मा २ लाख १० हजार पुरस्कार खेलाडीलाई प्रदान गर्नुभएको छ,’ उनले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
तर, त्यस्तो कोलाहलमा मरिहत्ते गरेर बाँड्नुको साटो व्यवस्थित किसिमले सम्मानपूर्वक पनि वितरण गरेको भए हुन्थ्यो नि ? भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘त्यस्तो अस्तव्यस्त होला भन्ने सोचिएन । खेलाडीहरुलाई छुट्टै राखेर अध्यक्षज्यूले नै प्रदान गर्ने योजना थियो । तर, त्यस्तो परिस्थिति नदेखिएपछि हतारमा बाँड्नुपर्‍यो ।’
पौडेलका अनुसार अध्यक्ष तिमल्सिना क्रिकेटप्रेमी हुन् । उनी नेपाली क्रिकेटका बारेमा निकै अपडेट छन् र प्रत्येक खेलाडीलाई चिन्छन् । ‘उहाँ नेपालको क्रिकेटबारे चासो राख्नु हुन्छ, त्यसैले खेलाडीलाई थोरै भए पनि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सानो नगद पुरस्कार प्रदान गनुएभएको हो,’ पौडेलले भने ।
निश्चय पनि तिमल्सिनाले आफ्नो व्यक्तिगत पैसाबाट खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्नु सह्राहनीय छ । तर, ठाउँ र समयको विषयमा अलि विचार पुर्‍याएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ? अनलाइनखबरबाट
०७५ माघ २२ गते मंगलबार ई. सं. २०१९ फेब्रुअरी ०५ तारिख, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य
सामाजिक सन्जालमा एका एक भाइरल बनेका अशोक दर्जीको चिना हेर्दा ज्योतिषले गरे यस्तो अनौठो भबिष्यबाणी -भिडियो सहित
महोत्तरी पुगेका प्रचण्डलाई स्थानीयवासीले बाटोमै घेरा हालेर अन्तै लगेपछि….
सोच्दै नसोचेको घटना, आफ्नै बिरामी छोरालाई…